Waa kuma wiilka Soomaaliyeed ee ka qeyb galay shirka Dhalinyarada Qaramada Midoobay? – Somali Top News
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo door weyn kuleh isbadalka dalka ayaa imika dadaal weyn ku bixinaya ka qeyb galka shirarka dhalinyarada asaagooda ah ee ku nool caalamka.
Axmed maxamed Cabdi waa Arday Soomaaliyeed oo heerka Koowaad ee waxbarshada kawada Jaamacad ku taala dalka Tanzina wuxuu sanadkii tagay ee 2018 ka qeyb galay shirka dhlinyarada Qaramada Midoobay oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Dodoma.
Shirkan waxaa ka soo qeyb galay dhalinyaro kakala socotay 117-wadan iyo mas’uuliyiin katirsan hay’daha kala duwan ee Qaramada Midoobay, waxaana diiradda lagu saarayay sidii dhalinyarada ku nool wadamada xubnaha ka ah Qaramada Midoobay gaar ahaan kuwa uu dhaqaalahoodu hooseeyo loogu tababari lahaa hogaanka siyaasadeed iyo midka Bulsho.
Axmad Maxamed Cabdi oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku matalayay shirka Qaramada Midoobay u qabatay dhalinta Addunka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha adage ee dhalinta Soomaaliyeed ku nool yihiin iyo waxa ay u baahanyihiin si ay wax ugu qabtaan dalkooda iyo Bulshadaba.
Intii uu shirka socday waxa uu Axmad sheegay in dhalinta Soomaaliyeed ay u soo halgameen xurnimadii dalka, waxaase uu carabka ku dhuftay in hadda talada dalka ay yartahay doorka ay ku leeyihiin oo Odiyaal wadanka maamulaan.
Ahmed attends United Nations youth conference.
Ugu dambeyntii Axmad ayaa dhalinta Soomaaliyeed ugu baaqay iney kaalin firfircoon ka ciyaaraan dalka, maadama marwalba la dhaho waxaad tihiin mustaqalka dalka oo hadda waxba aan loo ogoleyn, isagoo sheegay in coldaaha dalka kajira lagu huriyo,waxaana dowladda Soomaaliya uu ugu baaqay in ay waxbadan u qabato dhalinyarada oo aan la ciilin si ay asaagooda ula tartamaan.
Soomaaliya waxey u baahantahay Boqolaal Axmad oo kale ah maadama ay ka qeyb qaadan karaan horumarka wadanka iyo waliba kan gobalka iyagoo door weyn ka qaata Nabadda iyo Isdhexgalka Bulshada.
@Xuquuqda Wareysigan wuxuu gaar u yahay warbaahinta Somalitopnews.com
← Midowga Africa oo waqtiga u sii kordhiyay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya
Qarax gaari lagu xiray oo la fashiliyay iyo ciidamada amaanka oo baaritaano wada →
Ciyaartii u dhaxeysay Soomaaliya iyo Itoobiya oo soo idlaatay
Shirka Dib u heshiisiinta Galmudug oo qarka u saaran inuu fashilmo kadib kulan dhexmara RW iyo madaxda Ahlu-Sunna